Ungawenza kanjani umtshina wamanga nge-Arduino | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Ungawenza kanjani umtshina wamanga nge-Arduino
UJuan Luis Arboledas | | I-Arduino
Ukuqhubeka neziphakamiso zokwenza amaphrojekthi akho, kulokhu ngifuna ukukukhombisa ukuthi kanjani dala umtshina wamanga othakazelisayo Ongashiya ngazo zonke izivakashi zakho zivule imilomo yazo ngenxa yokusebenza kwayo okuhle. Njengoba isihloko salokhu okuthunyelwe sisho, kulokhu sizosebenzisa ibhodi elula ye-Arduino ezosebenza njengomlawuli wayo yonke iphrojekthi.
Kule phrojekthi, ngaphezu kokufunda ukuthi lezi zinhlobo zemitshina zisebenza ngokujula kangakanani, okuthile okusathakazelisa, kuzosisiza ukwazi umzimba wethu usebenza kanjani nezimpendulo ezahlukahlukene ongazinikeza kuya ngesimo ozithola ukuso noma, ngakolunye uhlangothi, imizwa ohlupheka ngayo kuya ngombuzo abangakubuza wona.
1 Usebenza kanjani umtshina wamanga
1.1 Uhlu lwezingxenye esizodinga ukwakha umtshina wethu wamanga
1.1.1 Izinto ezidingekayo ze-elekthronikhi
1.1.2 Izinto Ezidingakalayo
1.1.3 Amathuluzi ayadingeka
1.2 Saqala ukubumba umtshina wethu wamanga ngokuxhuma iphrojekthi yonke
1.3 Manje yisikhathi sokuthuthukisa nokufaka yonke isoftware kumtshina wethu wamanga
1.4 Senza iziqeshana ezizongena eminweni yendaba ezohlolwa
1.5 Ukwenza ibhokisi lokugcina yonke i-hardware yethu
Usebenza kanjani umtshina wamanga
Ngaphambi kokuthi uqale nokwakha umtshina wakho wamanga, kungakuhle ukuthi uqonde ukuthi usebenza kanjani. Ngenxa yalokhu, ngokuqinisekile kuzoba lula kakhulu kuwe ukuthi uqonde ukuthi kungani i-hardware ixhunywe ngandlela thile futhi ikakhulukazi kungani ikhodi yomthombo eyenza konke kusebenze kahle ihlelwe ngaleyo ndlela. Lapho-ke kuzofika leyo ngxenye yokwenza ngokwezifiso ngokuqinisekile oyofuna ukuyizama shintsha futhi wenze ngokwezifiso iphrojekthi kuzo zonke izidingo ongase ube nazo.
Umqondo lapho le phrojekthi isuselwa khona ukuhlinzeka ngezindlela ongazuza ngazo linganisa umehluko wemizwa yomuntu ngamunye. Enye yezinto ezikhethekile zabatholi bamanga futhi abebesekelwe kuzo ekuqaleni lokho isikhumba sishintsha ukuqhuba ngokuya ngezifunda eziningi kungaba kanjani imizwa esinayo ngesikhathi esithile.
Lo mehluko ekuqhubekeni kwesikhumba sethu kubizwa ngomsebenzi we-Electrodermal. (Kunolwazi oluningi ngalo kwi-intanethi). Ngenxa yale ndawo yesikhumba sizozama, ngosizo lwe-Arduino kanye nesoftware ethile, ukubona zonke lezi zinguquko ezenzeka ekuqhubekeni kwesikhumba kuye ngemizwa yethu ngokusebenzisa ihluzo.
Ukuqala ukusebenza nomtshina wethu oyingqayizivele wamanga, njengoba sihlala sibona ezivivinyweni ezahlukahlukene, singaqala ngokuhlala kunoma yisiphi isihloko phambi kwehadiwe lethu, sixhume izinzwa futhi siphendule imibuzo elula efana nokuthi 'njengoba ibizwa kanjalo?'noma'uhlala kuphi?'. Le mibuzo Bazosebenza njengesisekelo sokwazi isimo somqondo sesihloko esifuna ukusibuza. Kamuva singabuza imibuzo ehlukile ukuthola ukuthi baqamba amanga noma cha ngoba bangaba nokwethuka, okuzoveza ushintsho kwisisekelo.
Uhlu lwezingxenye esizodinga ukwakha umtshina wethu wamanga
Ukwenza yonke le phrojekthi kuzofanele sisebenzise i-microcontroller ukuthola umehluko bese sithumela imininingwane kwikhompyutha. Ngokulandelayo, ukuze ikhompyutha yethu ithole imininingwane evela kule microcontroller, kufanele ifakwe i-chip yokuxhumana eyi-serial okusiholela esiphethweni sokuthi, ngokwesibonelo, i-Arduino Mini noma i-Adafruit ezinhlotsheni zayo ezishibhile akusisebenzeli thina. Leli phuzu liyisisekelo sokukwazi ukufeza le phrojekthi ngakho-ke, uma esikhundleni se-Arduino Nano njengoba sizoyisebenzisa sinolunye uhlobo lwe-microcontroller ekhaya, singalisebenzisa inqobo nje uma ine-chip yezokuxhumana ehlanganisiwe.
Izinto ezidingekayo ze-elekthronikhi
10 kOhm ukumelana
Saqala ukubumba umtshina wethu wamanga ngokuxhuma iphrojekthi yonke
Njengoba ukwazi ukubona esithombeni esitholakala ngaphezu kwale migqa, ukuhlanganisa yonke iphrojekthi kulula kakhulu kunalokho ongakucabanga ngoba empeleni kufanele wenze kuphela izinyathelo eziyisithupha ezilula:
Xhuma ikhebuli, phana ngobude bayo, kuphini ye-analog ka-Arduino
Xhuma i-resistor ku-Ground nakucingo esake saxhuma kulo phinikhodi ye-analog ka-Arduino
Xhuma ucingo olude ngokwanele kuphini ka-Arduino ka-5 volt
Xhuma i-anode (umlenze omude wokuhola) wokuluhlaza okwaholelwa kuphini 2 kanye ne-cathode (umlenze omfushane) emhlabathini
Xhuma i-anode ye-orange eholelwe kuphini 3 ne-cathode phansi
Xhuma i-anode ebomvu eholelwe kuphini 4 ne-cathode phansi.
Lena yonke intambo ozodinga ukuthi uyixhume. Empeleni, kwanele ukuba kanjena futhi kubekwe endaweni ethile ukuze kungahambi lutho. Singakufihla konke lokhu kamuva bese sikunikeza umbono oheha kakhulu.
Manje yisikhathi sokuthuthukisa nokufaka yonke isoftware kumtshina wethu wamanga
Ngaphambi kokuthi siqale nokukhulisa noma yini, kufanele kucace ukuthi, kokubili ukuhlela nokuhlanganisa yonke iphrojekthi sizosebenzisa inguqulo yakamuva ye-Arduino IDE. Sizosebenzisa le nguqulo ngoba, ekukhishweni kwakamuva, i-monitor yayihlanganisiwe esivumela ukuthi sikwazi ukubona idatha etholwe ngendlela ebonakalayo sibonga igrafu ngesikhathi sangempela esikhundleni sokusebenzisa i-serial monitor, lapho lolu lwazi luvela khona umbhalo.
Ukuze usebenzise le qapha kufanele sivule i-Arduino IDE, iya kumenyu yamathuluzi futhi kufanele itholakale ngaphansi nje komqapha we-serial. Lapho konke lokhu sesikulungisile, kuzodingeka ukuthi ulande ifayili engikushiyele lona ngezansi nje kwale migqa, ulivule bese ulilayisha lihlanganiswe ebhodini lakho.
Senza iziqeshana ezizongena eminweni yendaba ezohlolwa
Lapho nje umsebenzi usuqedile, sekuyisikhathi sokuthatha esinye isinyathelo futhi dala iziqeshana ezizobhekana nokuthola ukuqhutshwa okunikezwa isikhumba sethu ngesikhathi esithile.
Njengoba ukwazi ukubona ezithombeni ezisakazeke kukho konke lokhu okuthunyelwe, umqondo uyaqhubeka namathisela isiqeshana sephepha le-aluminium ezansi komugqa we-velcro. Lokhu kufanele kwenziwe ezingxenyeni ezimbili ze-velcro esizoyisebenzisa.
Lapho nje sesilungile imichilo, futhi njengoba ubona esithombeni esitholakala ngenhla kwale migqa, sekuyisikhathi soku xhuma ku-aluminium foil ikhebula esilixhume kuphini we-analog we-Arduino. Kumele senze lesi sinyathelo, ngendlela efanayo, ngesinye isiqeshana se-velcro nekhebula esixhume kulo iphini lamanje le-Arduino, kuphini le-5 volt. Qiniseka ukuthi ukuxhumana kuqinile futhi ngeke kunqamule ukuhambisa nje i-velcro kancane.
Ukwenza ibhokisi lokugcina yonke i-hardware yethu
Kulokhu sizobheja yenza uhlobo lwebhokisi lokugcina zonke izingxenye zedetector yethu yamanga ngendlela enobudlova kepha ephumelelayo. Umqondo ukudala igumbi elincane ukugcina izindandatho ze-velcro. Lokhu-ke, kufanele kube nezimbobo ezintathu ezincane ukuze kubonakale ama-LED.
Njengoba ucabanga nje, impahla esizoyisebenzisa ukwenza lolu hlobo lwebhokisi yikhadibhodi elivela ohlwini lwezinto ezidingekayo. Kusukela kumakhadibhodi esinawo sizosika onxande ababili abanamasentimitha ayi-15 x 3, unxande onamasentimitha ayi-15 x 5, onxande abathathu abangu-4 x 3 amasentimitha, unxande ongamasentimitha ayi-9 x 5 kanye noxande olungu-6 x 5 amasentimitha.
Lapho wonke ama-rectangles esikiwe, sizothatha i-15 x 5 cm eyodwa ezosebenza njengesisekelo. Amaxande amabili ayi-15 x 3 namabili ama-5 x 3 azonamathiselwa ezinhlangothini zesisekelo. Manje yisikhathi sokunamathisela unxande wesithathu u-5 x 3 kusisekelo ngamasentimitha ayisithupha ukusuka ohlangothini.
Kuleli qophelo kufanele ube nonxande ohlukaniswe izinhlangothi ezimbili, elinye libe nobude obungamasentimitha ayisithupha kanti elinye libe nobude obungamasentimitha ayi-6.. Uhlangothi olunobude obungamasentimitha ayi-6 kulapho sizobeka khona i-elekthronikhi ngenkathi ngakolunye uhlangothi, kulapho kuzofakwa khona amaphakethe eminwe.
Kuleli qophelo kufanele sisike izimbobo ezi-3 kuphela, ubukhulu bama-LED, kunxande ongu-6 x 5 cm, sizinamathisele eduze kuka-6 cm. Kungashiywa kuphela ukunamathela, nge-tape yokunamathisela, uhlangothi olufushane lukanxande olungu-9 x 5 cm ohlangothini olukude kakhulu nohlangothi olungu-9 cm. Lesi sinyathelo sokugcina sizosebenza njengohlobo lwesembozo esizokwehla senyuka sigcine futhi siveze amaphakethe eminwe..
Lapho sesizifakile zonke izinto ngaphakathi kwebhokisi, uma konke kuhambe kahle, kufanele sibe nomtshina wamanga omncane phambi kwethu. Njengoba mhlawumbe ucabanga, yize ukusebenza kwayo kulula kakhulu, iqiniso ukuthi akukacaci kusukela lapho iningi lemishini yokuthola amanga inezinzwa eziningi, njengokuqapha izinga lokushaya kwenhliziyo, ukunquma ngokuqiniseka okuningi ukuthi isihloko sinamanga noma cha.
Ukwaziswa okwengeziwe: abafundiswayo
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » I-Arduino » Ungawenza kanjani umtshina wamanga nge-Arduino
I-Ardublock: Kuyini Futhi Yini Ongayenza Ku-Arduino Yakho
Uyenza kanjani irobhothi: Izinketho ezi-3 ezihlukile